श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने ? थाहा पाऔँ राम्रा तरिका - Dainik Plus info
Home / Life / श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने ? थाहा पाऔँ राम्रा तरिका
श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने ? थाहा पाऔँ राम्रा तरिका
जब एक महिलाको विवाह हुन्छ तब उनी यहि मनोकामना लिएर बसेकी हुन्छिन् कि उनको श्रीमानले उनलाई सधैँ खुसी राखोस् । महिलाले मात्र होइन समाजका हरेक प्राणीले यहि सोच्ने गर्दछ कि एउटा श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई सधैँ खुसी राख्नुपर्छ ।
तर यो कसैले पनि सोचेको हुँदैन कि श्रीमतीको पनि आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्ने कर्तव्य हुन्छ । श्रीमान–श्रीमती एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएका कारण दुबैको खुसी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
तर यदि कहिलेकाँही तपाईंको श्रीमान उदास देखिएमा तपाईंले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ तपाईंका श्रीमान् तपाईंका कारण नै दुखी भइरहेका छन् । तपाईंको कारण र अरु कसैका कारणले तपाईंको श्रीमान तनावमा भइरहेको तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्छ । त्यसकारण हामी तपाईंलाई श्रीमानलाई सधै खुसी राख्ने तरिका बताउँदैछौँः
१. उनको कुराहरु सुन्नुहोस्ः
२. उनको जिम्मेवारीलाई बाँड्नुहोस्ः
३. उनको करियरमा रुची लिनुहोस्ः
४. पैसा बगाउन बन्द गर्नुहोस्ः
५. बेडमा उनलाई खुसी राख्नुहोस्ः
६. बेकारको बहस नगर्नुहोस्ः
७. उनलाई तपाईंको कार्यक्रमको जानकारी दिनुहोस्ः
८. आफ्नो जीवन पनि बाँच्नुहोस्ः
९. आर्थिक रुपमा उनलाई कहिले पनि धोका नदिनुहोस्ः
१०. भविष्यको योजना एकसाथ बनाउनुहोस्ः
११. उनको आमा–बुवालाई इज्जत गर्नुहोस्ः
१२. उनको साथी बन्नुहोस्ः
तपाईंहरु दुईमा श्रीमान–श्रीमतीको भन्दा साथीको सम्बन्ध बढि हुनु आवश्यक छ । आफ्नो श्रीमानको साथी बन्नुहोस्, उनको आमा अथवा बोस होइन । (एजेन्सी) भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस